Thursday June 25, 2020 - 19:37:56 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Iska hor'imaad culus ayaa maanta degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan bartamaha dalka Soomaaliya ku dhaxmaray ciidamo kawada tirsan maamulka isku magacaabay 'Hirshabelle'.
Wararka ka imaanaya Hiiraan ayaa sheegaya in iska hor'imaad in mudda ah socday uu gudaha magaalada ku dhaxmaray ciidamo daacad u ah guddoomiyaha degmada Buula Burde iyo ciidamo Boolis ah.
Goob joogayaal ayaa sheegay in labada dhinac ay isku qabteen lacago baad ah oo ay ka qaadeen gaadiidka dadweynaha, khasaara dhimasho iyo dhaawac ah ayaa la sheegay in uu ka dhashay iska hor'imaadka.
Dhinaca kale maleeshiyaadka maamulka Hirshabelle ayaa maanta gubay dhowr guri oo kuyaal degmada Buula Burde, guryahan oo ay lahaayeen dad shacab ah ayay maleeshiyaadku si ula kac ah dab uqabadsiiyeen.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay arkayeen maleeshiyaadka oo dab qabadsiinaya dhowr guri, arrintan ayay ka caroodeen shacabka rayidka ah waxayna dhigeen iskusoo baxyo ay ku diidanyihiin in dab laqabadsiiyo guryo.
Maleeshiyaadka gacan saarka laleh ciidamada Xabashida Itoobiya iyo kuwa Jabuuti ayaa dhibaato dhan walba ah ku haya shacabka ku dhaqan degmada Buula Burde balse arrinta gubidda guryaha ayaa ah mid ku cusub magaalada.